Mila famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany? Ity Konferansa any Londres ity dia hahazoanao vola
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Mila famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany? Ity Konferansa any Londres ity dia hahazoanao vola
Misy ny fironana vaovao. Ity fironana ity dia tafiditra ao anaty kaonferansa vaovao manerantany. Ny anarana dia ny Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahantany sy fampiasam-bola (ITIC) Ny toerana dia any Londres sy ny datin'ny 1 sy 2 Novambra 2019.
Misy foto-kevitra vaovao momba ny tanana hanolorana ny filanao fampiasam-bola ary miaraka amin'izay hihaona amin'ireo manam-pahaizana manerantany, ary olo-malaza maro amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany maro vonona hiresaka aminao.
Raha mikasa ny hanatrika ny World Travel Market ianao dia miala fotsiny telo andro mialoha. Tokony ho mendrika ny fotoananao sy ny vidinao izany, ary mihevitra ny sasany fa ilaina ny manatrika hetsika iray.
Ny fifantohana amin'ny kaonferansa dia ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany:
Asehoy ny tetik'asa fizahan-tany, hifaneraserana mivantana ary hametrahana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny mpamatsy vola, banky fampiasam-bola ary orinasa tsy miankina mitady tetik'asa mivantana sy azo entina mitrandraka mba hitrandrahana ny fiverenan'izy ireo amin'ny fampiasam-bola.
ITIC dia manome fidirana amin'ny minisitra sy mpanao politika amin'ny firenena maromaro izay hanatrika ny kaonferansa antsika. Ny tena tanjon'izy ireo dia ny kolokoloina ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafiny roa sy ny firenena eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Ny valan-dresaka dia hanolotra mpandray anjara tombontsoa hanombohana fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa (LOI sy MOU) samy hafa izay mitondra any amin'ny famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany fizahan-tany maharitra mandroso amin'ny vanim-potoana.
Alain St. Ange (filoha ATB) ary Dr. Taleb Rifai (mpiaro ATB)
Ny Birao Mpanolo-tsaina ITIC dia tarihin'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneraly teo aloha an'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany, ary mpiaro ny Birao fizahantany afrikanina.
Izy dia mitarika ekipa manam-pahaizana momba ny fizahantany manerana izao tontolo izao hifanakalo hevitra momba ny modus operandien'ity fihaonambe ity izay mifantoka amin'ny fametahana sori-dalana ho an'ny hoavin'ity indostria ity ao anatin'ny toe-javatra misy manerantany: Tsy fahatokisana ara-toekarena, fifandonana, loza voajanahary, fiovan'ny toetrandro. , fampihorohoroana, fanovana paradigma ho fiarovana sy fiarovana ny fizahan-tany, sns. Vokatr'izany, ny fitsabahana ara-teknika ataon'ireo manampahaizana manokana amin'ny sehatra amin'ny kaonferansa dia hojeren'ny Birao ara-dalàna miaraka amin'ny fiantohana ny adihevitra avo lenta ho an'ny mpihaino kaliberaly avo lenta.
Anisan'ireo mpandahateny ireo:
HRH Princess Dana Firas of Jordan, HE Ramatoa Marie-Louise Coleiro Preca, filoha Emeritus avy any Malta, Hon. Elena Kountoura (mpikambana ao amin'ny Parlemanta eropeana); Minisitry ny fizahantany: Hon. Najib Balala (Kenya), Hon. Edmund Bartlett (Jamaika), Hon. Memunatu Pratt (Sierra Leone), Hon. Nikolina Angelkova (Bulgaria) Alain St. Ange, filoham-pirenena Afrikanina momba ny fizahantany, Seychelles, Cuthbert, Ncube, filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina- hanonona vitsivitsy fotsiny. Ny fihaonambe dia haarahan'i Andriamatoa Rajan Datar, Presenter ary Broadcaster miaraka amin'ny BBC.
Ny fihaonambe dia mifantoka manokana amin'i Afrika sy ny Nosy ary tohanan'ny Birao fizahantany afrikanina. Ireo mpikambana ATB dia mahazo fihenam-bidy lehibe.
Ny 1 sy 2 novambra no mety ho andro manandanja indrindra ho an'ireo izay manatrika ny World Travel Market any London amin'ny Novambra 4. Ny toerana hanaovana ITIC dia ao amin'ny Intercontinental Park Lane London.
Fampahalalana bebe kokoa sy fisoratana anarana amin'ny www.rit.uk